Real Madrid oo xalka weerarkeeda ka dhex aragtay Manchester City! - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Real Madrid oo xalka weerarkeeda ka dhex aragtay Manchester City!
Naadiga Real Madrid ayaa xaalad aad u dhib badan dhex maquurraneysa weliba si gaar ah weerarkeeda maadaama ay soo food saartay abaar dhanka goolasha ah.
Tan iyo markii uu kooxda isaga tagay Cristiano Ronaldo, Los Blancos ayaa dhibaato gool dhalis la’aan ah ay soo food saartay, waxaana durba ay billawday in suuqa kala iibsiga kaa raadiyaan weeraryahan kooxda ka caawin kara inay goolal badan dhaliso.
Majaladda kasoo baxda Ingiriiska ee Mirror ayaa tilmaameysa in Real Madrid ay bartilmaameedkooda koowaad ka dhiganayaan weeraryahanka Manchester City ee Raheem Sterling.
Xiddigga xulka qaranka England ka tirsan ayaa hadda kula jira City qanadaraas ay ka harsantahay 18 bilood, isagoo toddobaad walba £180,000 ka qaata Etihad, welina wax heshiis kordhin ah ma uusan la gaarin kooxdiisa.
Sterling oo hadafka Madrid ahaa xilligii uu ku sugnaa Liverpool, ayaa hadda waxaa xiiso badan u muujinaya maamulaha Los Blancos ee Julen Lopetegui kaasoo u arka inuu xal u noqon karo taag yarida dhanka weerarka.
23-jirkan ayaa xilli ciyaareedkii hore qayb libaax leh ka qaatay in kooxda Pep Guardiola ay hanato horyaalka Premier League-ga, sidoo kale waxa uu guud ahaan xillli ciyaareedkaas saftay 47 kullan isagoo dhaliyay 23 gool dhammaan tartamada.